गानो कुहिने रोगले केरा खेती नष्ट- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
गानो कुहिने रोगले केरा खेती नष्ट
कार्तिक १७, २०७६ अर्जुन राजवंशी
(बिर्तामोड) — गानो कुहिने रोगले केराका बोट मर्न थालेपछि झापाको बाह्रदशी गाउँपालिकाका किसान चिन्तित बनेका छन् । करिब ५० बिघा जमिनमा गरिएको व्यावसायिक केरा खेतीमा ६ महिनायता गानो कुहिने रोग देखापरेको छ ।
सरुवा रोग भएकाले बगानका अरू केराका बोटमा रोग सर्ने क्रम बढ्दो छ । गानो कुहिन थालेपछि केराको पात पहेंलो हुन्छ । केही सयमपछि बोट नै सुकेर ढल्छ । ‘कुन रोग हो भन्ने नै पहिचान भएन,’ किसान कुलप्रसाद चिमरियाले भने, ‘रोग बढ्दै जाँदा हामीले जानेसम्मको उपचार गरिरहेका छौं तर रोकथाम भएको छैन ।’
रोग लागेको बोटमा फल लाग्दैन । फल लागिसकेपछि रोगले भेटायो भने फल फस्टाउँदैन/बढ्दैन । उक्त रोगले नयाँ बिरुवालाई समेत संक्रमित बनाउने गरेको चिमरियाले बताए । ‘हाम्रो खेतीमा १५० भन्दा बोटको गानो कुहिएको छ,’ अर्का स्थानीय लक्ष्मी चिमरियाले भने, ‘रोग नै पहिचान गर्न नसकिएकाले समस्या भइरहेको छ ।’
रोग पहिचानका लागि कृषि ज्ञान केन्द्रका कृषि अधिकृतहरूले पनि बगान अवलोकन गरेका छन् । उनीहरूले पनि रोग पहिचान गर्न नसकेको चिमरियाले बताए । ‘रोग पहिचान गर्न ज्ञान केन्द्रको सहयोगमा बोटसहित केराका नमुना भारतीय ल्याबमा परीक्षणका लागि पठाउन लागेका छौं,’ चिमरियाले भने ।
बाह्रदशी गाउँपालिका–७ बत्तीसबिघामा झापा र मोरङका २५ जना किसानले ४८ बिघा जमिन लिजमा लिएर व्यावसायिक केरा खेती गरिरहेका छन् । धान खेती मासेर किसानले केराका बोट लगाएका हुन् । केरा खेतीबाट प्रतिबिघा ४ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने गरेको चिमरियाले बताए । चिमरिया दाजुभाइले १० बिघा जमिन लिजमा लिएर केरा खेती गरेका छन् । उनीहरूले गत जेठदेखि साउन महिनासम्म ७ बिघा खेतीबाट २८ लाख रुपैयाँको केरा बिक्री गरे । उक्त आम्दानी लिन प्रतिबिघा लिजबापत ३५ हजार, २० रुपैयाँ गोटा बिरुवा, मल, पानी, औषधिलगायत गरी १२ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको लक्ष्मी चिमरियाले बताए । बत्तीसबिघाका किसानले उत्पादन गरेको सबै केरा काठमाडौंका व्यापारीले खरिद गरेर लाने गरेका छन् । ‘हामीले केरा उत्पादन मात्र गरिदिनुपर्छ । काठमाडौंका व्यापारी बगानसम्मै आउँछन् । आफैं काट्छन् । ढुवानी र लोड–अनलोड खर्च आफैंले बेहोरेर केरा किनेर लान्छन्,’ किसान मिलन संग्रौलाले भने । आम्दानीको हिसाबले केरा खेती १ नम्बरको व्यवसाय भएको अर्का किसान भीमबहादुर वाग्लेले बताए । ‘आम्दानी राम्रो भएकाले यो वर्ष आसपासका किसानले थप ५० बिघा जमिनमा केरा खेती लगाउँदै छन्,’ उनले भने ।
गानो कुहिने रोग पहिचान गरेर समाधानको उपाय देखाइदिन किसान कुलप्रसाद चिमरियाले सरकारसँग माग गरे । ‘हामीलाई बरु अनुदान चाहिँदैन । सरकारले विशेषज्ञ प्राविधिकबाट यो कुन रोग हो, पहिचान गरिदियोस् । त्यसपछि के गर्दा रोग निर्मूल पार्न सकिन्छ उपाय देखाइदियोस्,’ चिमरियाले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा यत्ति गरिदियो भने हामीलाई सरकारले लाखौं रुपैयाँको अनुदान दिएको सम्झिनेछौं ।’ केराको बोटमा अनौठो रोग देखापरेको कृषि ज्ञान केन्द्रका कृषि अधिकृत शेषराज पौडेलले बताए । उनले रोग पहिचान गर्ने कार्य भइरहेको बताए । ‘रोग पहिचान गरेर समाधान गर्नैपर्छ । नत्र, बगान सबै सखाप पारिदिन्छ,’ पौडेलले भने । प्रकाशित : कार्तिक १७, २०७६ ०८:५८
किसानका दु:ख : धान खरिदमा व्यापारीको मनोमानी
कार्तिक १७, २०७६ ठाकुरसिंह थारू
(बर्दिया) — खाद्य संस्थानले धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गरे पनि व्यवसायीले तोकिएको मूल्य नदिँदा किसान मारमा परेका छन् । व्यापारीले आफूअनुकूल धान खरिद गरेपछि श्रमअनुसारको मूल्य नपाएको किसानको गुनासो छ ।
संस्थानले मोटा धान प्रतिक्विन्टल २ हजार ५ सय ३२ रुपैयाँ र मध्यम धान २ हजार ६ सय ७३ रुपैयाँ तोकेको छ । व्यापारीले भने २ हजारदेखि २ हजार २ सय रुपैयाँ मात्र किसानलाई दिने गरेका छन् । त्यसले लागतसमेत नउठ्ने किसानको गुनासो छ । उनीहरू धान खेतीका लागि किनेको मल र बीउको ऋण तिर्न धान सस्तोमै बिक्री गर्न बाध्य छन् ।
खेती मात्रै गर्ने किसानको आम्दानीको वैकल्पिक स्रोत नभएका कारण धानमै निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ । औषधि उपचारका लागि धान दिने सर्तमा व्यवसायीले पहिले नै पैसा लगानी गरिसकेका हुन्छन् । जसका कारण किसान अरू व्यवसायीलाई धान बिक्री गर्न सक्दैनन् । वर्षातको समयमा किसानलाई मल किन्न पैसा आवश्यक पर्छ । त्यसैको फाइदा उठाउँदै व्यवसायीले अहिले सस्तो मूल्यमा धान किनिरहेका हुन । उनीहरूले तीन महिनाअगावै किसानलाई पैसा लगानी गरेकाले पहिला नै कबोल गरेको मूल्यमा खरिद गरिरहेका छन् ।
‘मल र बीउको मूल्य निकै महँगो छ । ट्र्याक्टरबाट खेत जोताउन उस्तै महँगो पर्छ । असारमा किसानसँग पैसा हुँदैन । त्यसैले महाजन (ऋण दिने व्यक्ति) सँग पहिले नै पैसा लिनु पर्ने बाध्यता छ,’ किसान जुमन नाउले भने, ‘एक हप्ताअगाडि प्रतिक्विन्टल दुई हजारमै धान बिक्री गरें ।’ सरकारले मूल्य तोके पनि आफूहरू सधैं ठगिनुपर्ने बाध्यतामा रहेको उनले बताए ।
धानको मूल्यले मलखाद र बीउ किन्न ठिक्क हुने उनीहरूको भनाइ छ । ‘व्यापारीहरूको मनोमानी छ । जतिमा मन लाग्यो, त्यतिमै किन्छन् । हामी केही गर्न सक्दैनौं,’ बाँसगढी नगरपालिकाका किसान हरिराम चौधरीले भने, ‘धान बिक्री नगरे आलुको बीउ कहाँबाट किन्नु ! मल र हिउँदे बालीको बीउ किन्नका लागि पैसा आवश्यक पर्छ ।’
खाद्य संस्थान अञ्चल कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख भरतराज खनियाँले किसानले सस्तोमा धान बिक्री गरिरहेको बारे सोध्न नमिल्ने बताए । उनका अनुसार घरव्यवहार मिलाउन, मलखाद किन्न र ऋण तिर्न सस्तोमा धान बिक्री गरेको हुन सक्छ । उनले व्यापारीलाई तोकिएकै मूल्यमा धान किन्न बाध्य पार्न नसक्ने जनाए ।
धानको मूल्य तोकिएपछि मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्नुपर्ने नियम छ । मन्त्रालयले यति परिणाममा धान किन्नुपर्ने परिपत्र गर्छ । संस्थानले तोकेको मूल्यलाई मान्यता दिन जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वको समितिले निर्णय गर्नुपर्छ । ‘धान किन्ने सरकारी प्रक्रिया निकै लामो र झन्झटिलो छ । किसान त्यो कुर्न सक्दैनन् । हामीले पनि प्रक्रिया नपुर्‍याई धान किन्न सक्दैनौं,’ प्रमुख खनियाँले भने, ‘संस्थानले धान किन्न अझै डिपो राखेको छैन किसान भने धमाधम धान बिक्री गरिरहेका छन् ।’
प्रकाशित : कार्तिक १७, २०७६ ०८:५७
कहाँ रोकियो कृषकलाई राहत ?
राजु चौधरी, कृष्ण आचार्य
वैशाख ३ सम्म सेयर बजार पनि बन्द
कोभिड–१९ विरुद्धको प्रतिकार्यका लागि विश्‍व बैंकको ३ अर्ब बढी सहयोग
नवनियुक्त गभर्नर अधिकारीले गरे पदबहाली : ‘वित्तीय क्षेत्रप्रति नागरिकको विश्वास जोगाइराख्छु’
कोरोना कोषमा जम्मा भयो करिब दुई अर्ब
हाल १,४३१,९०० ८२,१९५ ३०१,५४३
लकडाउनमा खुलेका पुरुष
गौरी तमू चैत्र २५, २०७६
विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिरहेको कोभिड–१९ को कारण यति बेला देश लकडाउनमा छ । लकडाउनले हामी फुर्सदिला भयौं । पुस्तक पढ्ने, चलचित्र हेर्ने, परिवारसँगै मीठामीठा परिकारहरू बनाएर खाने...